IWatermark # 1 ye-iOS - Iifoto zeWatermark | Iplum iyamangalisa
Asanda: 2 / 23 / 21
Iifoto zeWatermark zokuKhusela iiFoto zakho kunye noMsebenzi.
IWatermark yeIOS - Iifoto zeWatermark
Ngokulula, khusela iifoto zakho kunye neevidiyo ngombhalo, umzobo, utyikityo, i-watermark yeQR. Ukongeza i-watermark ebonakalayo kwifoto ebonisa ukuba yenziwe kwaye yeyakho. Ukubhengeza Watermark kubaluleke kakhulu kwaye kufana nokusayina igama lakho emfanekisweni. I-watermark ibonisa ngokufihlakeleyo, nokuba ifoto yakho iya phi, yeyakho. Ukujonga amanzi kungasetyenziselwa ukongeza i-imeyile, i-url, umyalezo wakho okanye imifanekiso emnandi nakweyiphi na ifoto okanye iPokemon Go umfanekiso weskrini okanye ividiyo.
Yifumane kwiVenkile yeApple yeApple
- UTerry Omhlophe
UPhyllis Khare uphonononge indlela yokubukela iifoto ngeWatermark iOS kwiwebhusayithi yeDaily Motion
IWatermark, kuphela kwesixhobo sewermarking esifumaneka kuwo onke amaqonga ama-4 e-iPhone / i-iPad, iMac kunye neeWindows. IWatermark sesona sixhobo sithandwayo sokujonga ukhuseleko kwiifoto zakho.
Watermark Ukukhusela iifoto zakho
-Iifoto zihamba ngentsholongwane kwaye emva koko zibhabha emhlabeni jikelele. Iifoto zeWatermark ezinegama lakho, i-imeyile okanye i-url ukuze zihlala zinonxibelelwano olubonakalayo nolusemthethweni kuwe.
Inguqulelo yenguqu ye-6.9.3
-I-batch emiselweyo yonke into
Inguqulelo yenguqu ye-6.9.2
-I-facebook, i-twitter kunye ne-instagram yokuthumela ngaphandle iifoto ezinamanzi zibuyile! Ukwabelana nge-facebook, i-twitter kunye ne-instagram ezoapps kufuneka zifakelwe kwaye zingene.
-Uphakamiso olukhulu (ukukhanya / iindlela ezimnyama ze-ui ngoku ziyaxhaswa)
Ukuphuculwa kombala wokukhetha umbala. iindlela ezininzi. Ikwanayo ne-eyedropper evumela ukukhetha enye yemibala ephambili kwifoto ukuba ibonwe ngamanzi. kucace ngakumbi kukusebenzisa umbala osele ukhona kwifoto yombala we-watermark.
-Ukuhlaziywa kweefoto ezininzi
-Udityaniswe kuhlobo lwe-12.4 ye-xcode
-Ihambelana ne-iOS 12-14.4 nangaphezulu
- nolunye uphuculo oluncinci kodwa olubalulekileyo
OKUBALULEKILEYO: Remember, cima ingxelo yasimahla emva kokuthenga. Ingakudida kwaye awusayi kuyidinga.